KUTHEKANI UKUBA IMVUME YOMFUNDI IPHELELWA PHAMBI KOKUBA I-DMV IPHINDE IVULWE? - IINDABA
Kuthekani ukuba iphepha-mvume lokufunda lomntwana wam liphelelwa phambi kokuba athathe uvavanyo lokuqhuba? Uboniso lwendlela
Ngaphezulu: Ndinedinga le-DMV, kodwa ndiyoyika ukuba ndihlaziya kwangethuba.
Umbuzo: Umzukulwana wam lo sihlala nathi unepemethe yokufundela ephela ngo Aug 8. Kuba sele epasile uvavanyo olubhaliweyo, akubonakali kufanelekile ukuba aqale phantsi ngeefees kunye novavanyo olubhaliweyo kuba engakwazi. ukufumana idinga uviwo emva-the-wheel. Sele sigqibe iiyure ezingama-50 zokuziqhelanisa, kwaye ubonakala ekulungele ukuyenza loo nto.
Uthini uDMV ngalento?
UMichael Scott, iWalnut Creek
Njengendlela kaMnu Iphepha likaFacebook imibuzo engaphezulu kunye neempendulo malunga Bay Area iindlela, freeways kunye nokuhamba.
UKUYA: Kakhulu, kodwa kuqala, ubuyela kwabanye abaqhubi abancinci abaneemvume.
Umbuzo: Unyana wam oneminyaka eli-16 ubudala wafumana iphepha-mvume lakhe lokufunda ukuqhuba ngo-Agasti kwaye savumelana ukuba uza kuzilolonga unyaka wonke phambi kokuba enze uvavanyo lwakhe lokuqhuba. Ewe, ngokukhawuleza ukuza kuthi ga ngoku, kwaye kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba athathe uvavanyo ngaphambi kokuba imvume yakhe iphelelwe kwiinyanga ezimbalwa. Yingxaki encinci kuyo yonke into ephambeneyo eyenzekayo, kodwa into esizama ukuyifumanisa.
UPam Evans, isiXeko saseRedwood
UKUYA: Iimvavanyo zokuqhuba ziye zanqunyanyiswa ngenxa yokuvalwa kwe-coronavirus, kwaye i-DMV iye yandisa iimvume zabafundi eziphelelwa phakathi kukaMatshi noJuni 30. Ukwandiswa ziinyanga ezintandathu, okanye iinyanga ezingama-24 ukususela kumhla wokufaka isicelo, nokuba yeyiphi na engaphambili.
Ukuza kuthi ga ngoku, ulwandiso aluquki iimvume eziphelelwa nguJuni. Iiofisi ezininzi zeDMV ziya kuvulwa, ke ukufumana idinga kunokuba lula.
Umbuzo: Unyana wam oneminyaka eli-16 ubudala wafunda ukuba iGeorgia kunye neWisconsin zivumela ulutsha olunemvume yokufumana iphepha-mvume ngaphandle kokuthatha uvavanyo lokuqhuba. Ngaba oko kunokwenzeka eCalifornia nangaliphi na ixesha kungekudala?
UKUYA: USteve-the-DMV-Boss ukhankanye kwiveki ephelileyo ukuba iindlela zaseGeorgia kunye neWisconsin zinokujonga apha, kodwa ndiyathandabuza ukuba singaya kude kube ngoku. Olu lutshintsho lwexeshana.
Umbuzo: Ndinedinga ngoMeyi 20 lokuba ndihlaziywe ilayisenisi yam yokuqhuba kunye nokufumana i-ID YOKWENENE kwi-ofisi ye-San Jose Senter Road, kwaye idinga liya kuhlonitshwa.
Ndingalihlaziya kwangethuba kangakanani iphepha-mvume lam? Ndicinga ukuba ndingawutsibela umpu. Ilayisensi yam ayiphelelwanga de kube nguOkthobha, ngomhla wam wokuzalwa wama-71. Bendikhe ndacinga ukuba ndinokuhlaziya kwangethuba kwiinyanga ezintandathu ngaphambi kokuphelelwa lixesha, kodwa ngoku ndiva ukuba eyokuqala ziinyanga ezine phambi kokuphelelwa lixesha.
Yeyiphi loo mihla eyinyaniso? Ngokunyaniseka, nguwe kuphela endikuthembileyo ukuba undinike ulwazi oluchanekileyo.
Ngaba kukhuselekile ukushukuma okanye ukuqhubeka ngqo? Uboniso lwendlela
I-Caltrans yokuhlawula amavolontiya e-Adopt-A-Highway phantsi kwenkqubo entsha yokucoca: Umboniso wendlela
Ii-tailgaters, ii-jumpers ezinemigca ephindwe kabini zenza i-I-880 i-express imizila yoyike: Umboniso wendlela
Kutheni i-DMV ifake iliso elinye ngelixa uvavanya? Uboniso lwendlela
UKUYA: Gcina elo dinga. Ngokwesiqhelo, abaqhubi baya kuhlaziya iilayisensi zabo phakathi kweentsuku ezili-120 zokuphelelwa kwexesha. Ukuba uphuma ngaphandle kwaloo festile yohlaziyo, bekufuneka wenze uvavanyo lolwazi ukuze wandise iphepha-mvume lakho eminye iminyaka emihlanu. Kodwa ekubeni uneminyaka engama-70, kufuneka uthathe uvavanyo olubhaliweyo xa uhlaziya ilayisenisi yakho nokuba ungena nini na.
Joyina uGary Richards kwincoko yeyure yonke emini ngoLwesithathu ku-www.mercurynews.com/live-chats. Khangela uGary Richards kwi Facebook.com/mr.roadshow okanye uqhagamshelane naye mrroadshow@bayareanewsgroup.com .